HALATRA LAVANILA MAITSO ANY ANTALAHA : Lehilahy iray nifandrombonan’ny vahoaka nodarohina
Tsy mitsaha-mitombo ireo olona any amin’ny faritra Avaratry ny Nosy iny no manohy ny asa ratsiny amin’ny resaka halatra lavanila maitso. 24 mars 2019
Na dia efa apetraka aza ny sazy henjana ho an’ ireo izay tratra, na misy aza lamina ifanarahana dia toa vao mainka mahatonga ireo sasantsasany minia, hamarotra mora ary mangalatra ireo lavanila eny an-tanimboly. Betsaka ireo mitaraina ny amin’ny fatiantoka isan-taona , hany ka tsy miandry ny mpitandro filaminana intsony ny fokonolona raha sendra mahatratra olon-dratsy fa avy hatrany dia mikononkonona fitsaram-bahoaka.
Araka ny angom-baovao voaray teo am-panoratana lahatsoratra omaly, tovolahy iray indray no tratran’ny fokonolona nangalatra lavanila mbola manta tao amin’ny Marofinaritra, Kaominina Sahantaha ny sabotsy maraina lasa teo. Tsy niandry ny fandraisan’andraikitry ny mpitandro filaminana intsony ny vahoaka fa nifandrombaka namono ity farany avokoa.
Vokany, naratra mafy teo amin’ny lohany, tavany ity tovolahy ity ka nandriaka ny rà. Soa ihany fa nisy ireo olona nampandre ny zandary tao an-toerana izay tonga haingana nandamina ny raharaha ary mandray an-tanana ny fanadihadiana ankehitriny.
Mitady vahaolana maharitra ny mpamboly sy mpandraharaha
Efa saika isan-taona no nisy olana miverimberina ny sehatry ny fambolena lavanila eto Madagasikara. Vao eny am-potony dia efa foana tsy misy intsony ny vokatra noho ny asa ratsin’ireo jiolahy. Toa lasa fanahiana ny amin’ny fatiantoka ny ankabeazan’ny mpamboly satria raha ny zava-misy hatramin’izao dia misy ny sasantsasany amin’ireo tantsaha no tsy manana lavanila intsony vokatry ny asan-jiolahy. Eo indrindra no angatahina amin’ny tompon’ andraiki-panjakana mba hijery akaiky ireo mpandraharaha sy ny mpamboly. Vahaolana amin’ny lafiny tsy fandriam-pahalemana amin’ny toerana betsaka mpamboly lavanila, hoy ireo mponina, no tokony hamafisina ny fiambenana, etsy andanin’izay ny isan’ny mpitandro filaminana miasa natao hiaro azy ireo.
Notsindrian’ireo solontenan’ny mpandraharaha hatrany koa moa ny tokony hisian’ny ny lamina apetraky ny mpitondra fanjakana ny amin’ny fandaminana ny famoahana ny vokatra ho fisorohana ny fikorontanana mety hiseho.